China Camouflage shei waterproof rip-nkwụsị obere obere ihi ụra maka ndị na-emepụta ihu igwe na-ajụ ezigbo oyi | Xueruisha
Kinddị akpa ụra a na-ejikarị eme ụlọikwuu n'èzí n'okpuru ọnọdụ ọkụ. Nke a bụ n'ihi na ebumnuche mbụ nke ụdị akpa ụra a na-ehi ụra bụ iji mezuo ihe ndị mmadụ chọrọ maka nkasi obi nke ịma ụlọikwuu n'èzí ruo n'ókè kachasị, nke a na-apụghị izere ezere na-eduga ná nkwụsị nke okpomọkụ. Kinddị akpa ụra a nwere ike iji dị ka ihe mkpuchi site na imeghe zipa.
I tetere n’abali oyi? Mgbe ị dinara n’ime akpa ụra n’ime ụlọikwuu, na-ama jijiji, na-ama jijiji, enweghị ike ịrahụ ụra ngwa ngwa n’ihi oyi, na-ege ntị n’oké ifufe dị n’èzí, mmiri ozuzo na snow, ị chọrọ ka akpa ụra dị otú ahụ mee ka ị nwee ọ beingụ ikpo ọkụ na oke oyi ihu igwe na-ehi ụra? Ugbu a, oge eruola ka ị mee nhọrọ dị mma. Emere akpa ụra a na-ehi ụra dị ka akpa ụra na-ehi ụra. Ejiri akwa mpempe akwụkwọ dị n'ụdị dị n'èzí, nke ejiri ọgwụgwọ na mmiri na-adịghị mma na-agwọ ya. Ọ nwere nguzogide ifufe dị mma, na-eguzogide ọgwụ na adịghị mfe imebi. Uwe dị n’ime ya dị nro na nkasi obi, ọ na-enwe mmetụta nke ukwuu na ahụ ya. Ihe bụ isi nkọwapụta akpa ụra a juputara na 90% ọbọgwụ ala 1600g, na ịba ụba bụ 650. Ọdịdị dị elu na usoro 3D na-eme ka akpa ihi ụra zuru oke, na ala na-ejupụta onye na-etinye okwu, nke ka mma maka ikpo ọkụ . Okpu okpu na-eji eriri ike siri ike, nke nwere ike mechie isi ma meziwanye mkpokọta mkpokọta, nke nwere ike inye gị obi ụtọ na gburugburu ebe oyi dị. Enwere ike iji akpa ụra a n'ọtụtụ ebe oyi na-enweghị nsogbu ọ bụla, yabụ ọ dabara maka ọnọdụ dịgasị iche iche, dịka ịma ụlọ obibi, picnics, ugwu ugwu, nyocha sayensị na mpaghara oyi, ọrụ, njem, na iguzogide oke oyi na ifufe. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na akpa ụra a, mana nkọwa nke akpa ụra anaghị egbo mkpa nke ahịa gị, mgbe ahụ ị nwere ike ịbịa gwa anyị okwu. Akpa ụra a na-akwado nhazi miri emi. Nwere ike ịhọrọ akwa na ndochi nke akpa ụra dị ka mkpa gị si dị. Nwere ike mado LOGO ma ọ bụ usoro iji gboo mkpa ndị ahịa na ahịa ahịa gị. Nabatara ịkpọtụrụ na ịtụ.
Nke gara aga: Hot ire magburu onwe mmiri ọgwụ ọchụ windproof mummy na-ehi ụra akpa maka agha dinta
Osote: Single Envelopu Splicable Ihi ụra akpa na Solid Agba maka opupu na mgbụsị akwụkwọ
Single Envelopu Splicable Ihi ụra akpa na Sol ...
2020 factory oyi okenye n'èzí maa ụlọikwuu ọbọgwụ / ...
N'èzí egwuregwu acha mummy ihi ụra akpa na ...
Hot ire magburu onwe mmiri ọgwụ ọchụ windproof mu ...
2020 emeputa elu 90% ala jupụtara Uwe ...
Solid agba splicable otu envelopu ihi ụra ...